Akhristayaasha iyo ebook-yada: Dhammaan wixii ku saabsan akhriska dhijitaalka ah iyo akhristayaasha elektarooniga ah | Dhamaan Akhristayaasha
E-buugaagta elektarooniga ah
eBooks bilaash ah
Akhristayaasha: akhristayaasha elektarooniga ah
Waxaan nahay mid degel ku takhasusay akhristayaasha iyo akhriska dhijitaalka ah. Waxaan falanqeyneynaa oo tijaabinaynaa dhammaan moodooyinka laga heli karo suuqa waxaanan kuu sheegeynaa xooggooda iyo daciifnimadooda.
Su'aasha caadiga ah. Haddii aad rabto inaad toos u abaarto barta, waxaan kugula talineynaa 2.
Kobo Clara HD | e-akhriste |...
Wararkii ugu dambeeyay ee blogga
Hadaad rabto inaad la socoto, waa kuwani wararkii ugu dambeeyay ee aan daabacnay kuwani waa wararkii ugu dambeeyay ee noocyada suuqa iyo adduunka. daabacaadda dhijitaalka ah iyo akhriska qaab elektiroonig ah.
Kindle Paperwhite (2021) - Dib u eegis
SPC Dickens Light Pro - Beddel wanaagsan oo jaban [Falanqaynta]
Kobo Sage, sharad leh buugaagta maqalka iyo stylus [Falanqaynta]
Faallooyinka dhammaan aaladaha
Waxaan tijaabineynaa iyo waxaan u falanqeynaa akhriste kasta akhriste si fiican, Toddobaadyo, si aan kuugu sheego waxa dhabta ah ee adeegsiga qalab kasta uu u eg yahay.
Mawduuceena xoogan ayaa ah inaan tijaabinay wax badan oo aan isbarbar dhigi karno oo aan kuu sheegi karno waxyaabaha uu ku fiicanyahay iyo mid kasta oo ka mid ah tartankiisa.
Amazon shidin, shirkadaha, Akhristayaasha, hardware
Dhammaan wixii ku saabsan Amazon iyo Kindle-kaaga
Waa wax aan muran ka taagnayn taas Kindle maanta waa aaladaha ay isticmaalaan akhristayaashu. Marka waxaan kaa tageynaa tan Shid gaar ah, oo leh casharro badan iyo tabaha si aad uga faa'iideysato ebook-kaaga 'Amazon'.
Shidin, hadda iftiin leh ...
Sida loo sameeyo biraawsarka shabakadeena Kindle dhaqso u soco (oo maxaad u sameyn weydaa)
Sida loogu cusbooneysiiyo Kindle-keena gacanta
Casharro: ku soo dejiso buugaag barnaamijka Kindle ee loo heli karo aaladaha mobilada iyo kiniiniyada
Haddii aad raadineyso inaad iibsato akhriste macluumaadka soo socda oo ay la socdaan isbarbardhiga akhristayaasha way ku caawin doontaa
Qalabka lagu taliyay
Akhristaha ugufiican tayada - qiimaha
Haddii aan ka hadalno qiimaha lacagta, waxaan sii wadeynaa inaan ku talinno Kindle Paperwhite inuu noqdo dhagaystaha ugu fiican
Haddii aad rabto inaad dib u eegto moodooyinka ugu xiisaha badan ee suuqa ku jira hadda, fiiri kuwa aan soo jeedineyno
Isbarbardhigga eReaders ugu fiican
Xusuus / Balaadhin
Paperle Kindle 6" 300dpi Sí Sí 4Gb / Maya 129.99 €
Kobo Aura H2O 6'8 " 300dpi Sí Sí 4Gb / Haa 201 €
SonyPRS-T3 Cabbirka 300dpi Maya Sí 2Gb / Haa 222 €
Xadhig 4 6" 166dpi Maya Sí 4GbN Maya 79.99 €
Kobo Aura One Cabbirka 300dpi Sí Sí 8Gb / Haa 227 €
Bq Cervantes 3 6" 300dpi Sí Sí 8Gb / haa 139.90 €
Voyage Kindle 6" 300dpi Sí Sí 4Gb / Maya 189.99 €
Nooca Cagaarka 6" 300dpi Sí Sí 4Gb / Maya 289.99 €
Maxaa muhiim u ah akhristaha / ebook
Sannado ayaa soconaya akhristayaashuna si isa soo taraysa ayaa loo xoojiyay loona soo saaray aaladaha Astaamaha sanado ka hor aan qiimeynay si aan u go'aansano e-akhristaha aan iibsano ayaa isbadalay. Markaa maanta laydhku waa waajib, halka dhawr sano ka hor aynaan qiyaasanayn inay noqon karto.
Marka, maxaan raadinaa 2019 haddii aan rabno inaan iibsanno ama dooranno dhegeyste?
Sida wax walba, waa inaan maskaxda ku haynaa ujeedada aan dooneyno inaan siino.
Cabbirka shaashadda iyo xallinta
Cabirka shaashadda ee akhriyayaashii caadiga ahaa weligiis wuxuu ahaa 6 ″ moodooyinka hadda socdaana waxay ku sii socdaan cabirkaas. Laakiin waxaa jira dhagaystayaal waaweyn oo badan oo cusub, oo leh 8 iyo 10 ″ shaashadood.
Akhristaha 6 'waa mid la maamuli karo oo fudud in la qaado. culeyskiisu wuu ka sii yaraanayaa markaan qabanno. Laakiin mid 10 ″ ah hadaanan safrin wuxuu na siinayaa khibrad aad u wanaagsan.
Xalka hadda la joogo akhristayaasha ugu horumarsan waxay la shaqeeyaan 300 dpi (pixels halkii inji) iyo kuwa kale oo aasaasi ah oo leh 166 dpi. Xaaladdan oo kale ayaa sifiican u fiican maxaa yeelay waxaan heli doonnaa qeexitaan ka wanaagsan
Waa muuqaalka ugu dambeeya ama shaqeynaya ee lagu daray e-akhristayaasha. Waxay isbeddel ku samayn kartaa iibsashadaada. Iftiiminta liidata waxay abuuri doontaa hooska waxayna ku siin doontaa khibrad akhris oo liita.
Akhristayaasha laydhka leh ayaa halkan u jooga inay sii joogaan, si fiican waxay yimaadeen waqti hore, laakiin hadda ebook kasta oo aasaasi ah durba waa lagu daray. Noocyada waa weyn ayaa u dejiyay sida ugu dhaqsaha badan kuwa yar yar ee tartamayana ma lahan wax xulasho ah laakiin inay sidoo kale ku daraan dhammaan moodooyinkooda.
Laydhku waa mid ka mid ah waxyaalaha ka dhigaya inuu nolosha batteriga ka soo gaabiyo gaabis.
Heerka nidaamka qalliinka, waxaa loo kala saaraa 2 koox, kuwa leh barnaamijyo u gaar ah iyo kuwa isticmaalaya Android, oo ah mid ka mid ah horumarkii ugu dambeeyay ee noocyo badan ay ku biirayaan.
Illaa iyo hadda akhriste kastaa wuxuu ku shaqeynayay softiweerkiisa, Kindle iyo Kobo aad ayey u hufanyihiin saaxiibtinnimo iyo aad ugu xeel dheer. Laakiin in muddo ah iyo gaar ahaan magacyada aan aadka loo aqoon waxay bilaabeen inay adeegsadaan Android-ka iyaga u oggolaanaya (haddii ay si fiican u wadaan) si ay ula qabsadaan noocyada waaweyn ee arrintan la xiriira.
Faa'iidooyinka Android ee qalabka wax lagu akhristo waa dhowr:
Waxaan rakibi karnaa tiro badan oo codsiyo ah oo kordhiya howlaha iyo fursadaha akhristaha. Akhriso oo Akhriso codsiyada dambe sida Getpocket, Instapaper, iwm. Waxaan xitaa rakibi karnaa barnaamijyada Kindle iyo Kobo oo waxaan ka heli karnaa koontooyinkeena barnaamijyadan.
Waxa ay tahay inaan ka taxaddarno waa ku-hadalka. Andorid ee akhristaha leh awood yar, waxay aadaan jerks waxayna abuuraan khibrad aan fiicnayn.
Laakiin mustaqbalka noocyo badan ayaa la socon doona Android si ay awood ugu yeeshaan inay la tartamaan kuwa waaweyn.
Astaamaha ugu waaweyn marka aan ka hadlayno akhristayaasha, kuwa u taagan tayadooda iyo nidaamkooda deegaanka ayaa ah Amazon Kindle y Kobo by Rakuten.
Kadib waxaa jira nook badan, Tagus, Tolino, BQ, Sony, Likebook, Onyx. Waxaan u leenahay qaybo gaar ah mid kasta waxaanan kaa dooneynaa inaad soo ogaatid waxa mid kasta oo ka mid ah uu ku siin karo.
Maxkamadeynta Maqalka ee Lacag La'aanta ah ee Amazon: 90.000+ Buugaag Maqal ah